Ukuphupha ngeentloni Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Iphupha lokuhlazeka. Siyakuxelela kwesi sikhokelo indlela yokutolika amaphupha kunye nendlela anokukunceda ngayo kubomi bakho bemihla ngemihla.
Iintloni yinto ekufuneka ube neentloni ngayo. Ingabonisa kwakhona into ebangela ukulahleka kwegama okanye imbeko. Ukusukela namhlanje imithetho yezentlalo ivulekile kwaye ayingqongqo njengakumaxesha angaphambili, umbono weentloni utshintshe kakhulu.
Umzekelo, ibikade ingacingeki into yokuba umntu abe yedwa kwigumbi elinye nomfazi ongatshatanga. Ukuba oku kwenzekile, kungabeka ukukhanya okungalunganga kumfazi okanye isixa esilihlazo, nto leyo ibonakalise ukuba ilihlazo kusapho lonke.
Namhlanje phantse akukho namnye kwinkcubeko yethu ocinga ngale meko, kuba yinto ethathwa ngokupheleleyo. Imida xa into ithathwa njengehlazo itshintshe kakhulu. Nangona kunjalo, nanamhlanje kukho iindlela zokuziphatha ezichazwa njengezihlazo okanye ezihlazo.
Le yindlela abantu abaninzi abaziva bezoyikeka xa ngequbuliso befumana beze esidlangalaleni. Abanye abantu, kwelinye icala, babona nokuba isilayidi esincinci njengehlazo elikhulu, njengokutyibilika kwintetho okanye i-glitch yobugcisa kwintetho.
Makhe sijonge ukuba ihlazo linokuthetha ntoni na kuhlalutyo lwamaphupha:
1 Uphawu lwephupha «ihlazo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ihlazo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ihlazo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ihlazo» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu "lwehlazo" luphawulwa kuhlalutyo ngokubanzi lwephupha ngokuchaseneyo. Oku kuthetha ukuba iphupha elinje likhomba Suerte, eziza kwenzeka kungekudala ebomini. Kwakhona, iphupha lokuhlazeka linokubhekisa kwizipho eziza kumkholisa umntu oleleyo ebomini bakho.
Ukuba umphuphi ubangela imvakalelo ephupheni lakhe okanye ebangela ihlazo, elimhlazisayo, kuya kufuneka alumke ngakumbi ekukhetheni abahlobo bakhe ebomini bakhe. Kwakhona, iiprojekthi zeshishini lakho aziyi kusebenza kakuhle. Ukuvezwa okanye ukuthotywa ngabanye abantu ephupheni kunokuchaphazela njani Yintlungu wabhekisa kumntu oleleyo ngaphambi kokubhengeza iziphene zakhe.
Ukutolikwa ngokubanzi kophawu "lwephupha", unobangela wehlazo ephupheni unokuba nomdla. Ke ngoko, yintoni ebangele le mvakalelo yokuthotywa kufuneka ithathelwe ingqalelo ngononophelo. Ngaba uye wachopha iblukhwe yakho esidlangalaleni? Okanye ngaba ufumana uxinzelelo okanye ubuvila bakho njengehlazo? Mhlawumbi nawe ukhe wathetha izithuko kwabanye.
Uphawu lwephupha «ihlazo» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lohlalutyo lwamaphupha, uphawu lweentloni ephupheni lusetyenziswa njengophawu lwe engekho zingqondweni, apho umphuphi wayeqonda ukuba khange enze ngokuchanekileyo kumcimbi othile ebomini. Esi senzo asihambelani nexabiso lakhe okanye isimilo sakhe. Kungenxa yoko le nto esoyika ukuwela kwigama elibi el mundo okanye woyika ukuzibeka kumbandela wokuphathwa gadalala kunye neentloni kwabo bakungqongileyo.
Ukuba uboshwe ngephupha kwaye ubonakalisiwe kukugculelwa kwabanye, kuya kufuneka ubeke ecaleni umendo wakho wangoku kwaye ucinge ngento entsha. Kuba lowo uleleyo uziva Cwepa kwaye ngoku kufuneka lihlawule eli tyala.
Nabani na owela ehlazweni ephupheni, mhlawumbi ngenxa yokuthandana, uhlala esoyika ukuthetha neqabane lakhe malunga nokwabelana ngesondo. Ukuba ihlazo livela ephupheni ngesikrelemnqa esikhulu, umntu kufuneka aqonde ukuba uxakeke kakhulu kukuhleba. Imvakalelo yokuthotywa ngokungabinamali ephupheni inokubonisa umphuphi uloyiko lokuphulukana. Nangona kunjalo, oku akubhekiseli kuphela kummandla wezinto eziphathekayo, kodwa nakwinqanaba leemvakalelo.
Uphawu lwephupha «ihlazo» - ukutolika kokomoya
Kubonwa ngokwembono egqithileyo, uphawu lwephupha "ihlazo" linokubhekisa kwixesha le ukuhambela phambili ngokomoya. Oku akuyi kuhlala kulula kumphuphi, kodwa kuya kuhlawula ekugqibeleni.